Saxafiga ayaa sharxaya dhibaatada PSG
Paris Saint-Germain ayaa dooneysa kabtanka Barcelona Lionel Messi. Way iska cadahay.
Ma cadda inay heystaan ​​awood dhaqaale oo ay ku dhameystiraan saxiixa, sida uu sheegayo saxafiga reer France ee lagu xushmeeyo Julian Laurens wareysi uu siiyaya Mundo Deportivo.
Tababaraha kooxda PSG Leonard ayaa lasheegayaa in uu la dhibtoonayo dhanka dhaqaalaha si uu uheysto Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe isla markaana uusan awoodin inuu bixiyo mushaarkiisa sababa laxiriira dhaqaalaha Korona Fayra.
Kubadda Cudurka Korona ee Kubadda Cagta ayaa hoos u dhigeysa dhaqaalaha, gaar ahaan saameyn weyn, marka lagu daro PSG si loo ilaaliyo sharciyada dhaqaale ee Yurub.
Mushaarka Neymar waa 30 30 milyan sanadkii sanadkii canshuurta kadib, Mbappe ayaa heli doona hadii uu saxiixo heshiis cusub, halka Messi uu doonayo lacagtaas ama kabadan.
Waa ku adag tahay dhaqaale ahaan Paris Saint-Germain, laakiin wararka ka imanaya caasimada Faransiiska ayaa sheegaya in PSG ay ku dadaali doonto sidii ay u xoojin laheyd heshiiska Messi ee Neymar iyo Mbappe.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in loo diro mid ka mid ah xiddigahooda haatan si ay boos ugu helaan laacibka reer Argentina.
Wararka la xiriirinaya Real Madrid iyo Mbappe ayaa laga yaabaa inaysan xaqiiqsan mustaqbalka dhow, halka PSG la sheegay inay sii heysaneyso Neymar haddii lagu qasbo inay iibiso mid ka mid ah labada xiddig.
Man Utd waa ogtahay waxa socda
Operation Barkhane confirms its edition of information